समाचार – Krazy NepaL
Apr62022 by adminNo Comments
पल साहलाई अर्को अदालत लागेपछि नायिका अनु शाहले आफ्नो कुरा व्यक्त गरेकी छिन्। उनी भन्छिन् ” उनी धेरै नै संघर्ष गरेर या सम्म आएको कलाकार हो, उहाँ धेरै नै मेहनती हुनु हुन्छ। हामी म्युजिक भीडियो खेल्दा इडीटर भएर काम गर्नु हुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै आफूलाई निखार्दै म्युजिक भिडियो मा स्थापित हुँदै जानु भएको हो। आफू राम्रो हाइट मा पुगिसकेपछि सबैले खुट्टा तान्ने गर्दछन् भन्दै यस्तो किसिमको समाचार मिडियामा न आएको भए हुन्थ्यो दुई जनालाई नैं उनीहरूको क्यारियर मा असर गर्दछ भन्दै आफ्नो कुरा राख्छिन्।“जे कुरा पनि आफूसँग भर पर्दछ, कसले कस्तो किसिमले नजिक हुन्छ त्यो आफैले बुज्ने कुरा हो । सबै कुरा आफैमा निहित हुने हुनाले सतर्क हुन जरुरी छ” उनी भन्छिन्। https://youtu.be/KMpZ6xpRoSI
काठमाडौं । पल शाह पक्राउ परेका छन् । जिप्रका तनहुँको प्रहरीले उनलाई आज पक्राउ गरेको हो । पलविरुद्ध जिप्रका तनहुँमा नाबालिगमाथि कर णीको जाहेरी परेको थियो । जाहेरी परेयता उनी फ’रा’र बनेका थिए । आज उनले आफैं प्रहरीमा उपस्थित हुने भन्दै फेसबुकमा स्टाटस हालेका थिए । सोहि अनुसार उनि आफै जिप्रका तनहुँमा उपस्थित भएका हुन्। सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिएको र घरेलु व्यवहार मिलाउन परेकाले आफू केही दिन हराएको बताएका छन् । प्रदर्शनमा आएको आफ्नो फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु–२’ लाई प्रभाव नपरोस् भन्ने हेतुले यसअघि प्रहरीमा उपस्थित हुन नसकेको भन्दै माफी समेत मागेका छन्। ‘मेरो आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिएको हुनाले साथै घरको सबै घरव्यवहार मिलाउनु परेकाले र मेरो फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ गत शुक्रबारदेखि नेपालभर प्रदर्शन भएका कारण फिल्मलाई असर नपरोस भनी म प्रहरीसामू उपस्थित ह
कलाकार जयनन्द लामा घरको गेटमै मृत अवस्थामा फेला परे, यसरि भएको रहेछ मृत्यु
काठमाडाै: वरिष्ठ लोकगायक जयनन्द लामाको निधन भएको छ । कलाकार लामाकाे आज बिहाहन भक्तपुरस्थित कौशलटारमा निधन भएको परिवारजनले जानकारी दिएकाे छ । उनी अभिनित टेलिसिरियल हल्का रमाइलोका निर्देशक मरिचमान श्रेष्ठ (बल्छी धुर्बे)ले लामाको निधन भएको जानकारी दिए । श्रेष्ठका अनुसार आज बिहान घरको गेटमै गाडीबाट ल’डे’को अवस्थामा उनी मृत फेला परेका थिए । उनी सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे नगरपालिका-२ धार्पाका स्थायी बासिन्दा हुन् । पाँच दशकअघि गायन यात्रा सुरू गरेका लामा ख्यातिप्राप्त लोकगायक, संकलक, अभिनेता, निर्माता तथा निर्देशक हुन् । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा जन्मिएका लामाले थुप्रै मौलिक लोकगीत गाउनुका साथै चलचित्र र टेलिश्रृंखलामा अभिनयसमेत गरेका छन् । उनले चलचित्र मनको बाँध, छक्कापञ्जा लगायत चलचित्रहरुमा पनि अभिनय गरेका थिए । पछिल्लो समय हाँस्य टेलीश्रृंखला हल्का रमाइलोमा उनले अभिनय गर्दै आएक
वरिष्ठ कलाकार जयानन्द लामाको निधन!
काठमाडौं । वरिष्ठ लोकगायक जयनन्द लामाको निधन भएको छ ।सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे नगरपालिका– २ धार्पाका लामाको आज बिहान भक्तपुरस्थित कौशलटारमा निधन भएको हो । हिजो राति एक भोजमा सहभागी भएर घर फर्किएका लामा गाडीबाट झर्ने बेला लडेका थिए । लडेर लामाको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको थियो । उनले गाएका र संगीत भरेका थुप्रै गीतहरु नेपाली संगीतबजारमा चर्चित छन् । अन्य समाचार / सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वरोजगारीमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले पुरस्कृत गर्ने भएको छ । त्यसका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना प्रकाशित गरी पुरस्कारका लागि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर उद्यम गरेका व्यक्तिसँग आवेदन आह्वान गरेको छ । ११ फागुन, काठमाडौं । लोक गायक तथा कलाकार जयनन्द लामाको निधन भएको छ । उनी अभिनित टेलिसिरियल हल्का रमाइलोका निर्देशक मरिचमान श्रेष्ठ (बल्छी धुर्बे)ले लामाक
ओमिक्रोन भेरियन्ट देखिएपछि तात्यो देउवा सरकार, आजै लियो एक्सन !
काठमाडौं । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट देखिएसँगै देउवा सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको तेस्रो डोज अथजा बुस्टर डोज लगाउनेबारे छलफल शुरु गरेको छ । विभिन्न देशहरुले कोभिड(१९विरुद्ध खोपको प्रभावकारी कम हुन नदिन बुस्टर डोज लगाउँदै आएका छन् । नेपालमा बढी संक्रामक हुनसक्ने अनुमान गरिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण देखिएसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुस्टरडोज लगाउनेबारे छलफल अघि बढाएको हो । अमेरिका, चीन, बेलायत, ईयु, रुस, क्यानडा, फ्रान्स, इजरेल, जमर्नी, ब्राजिल, इटाली, लगायतका ३० बढी देशले कोरोना भाइरसको बुस्टरडोज यसअघि नै लगाउन थालिसकेका छन् । नेपालमा पनि मन्त्रालयले अब, जोखिमपूर्ण समुहका नागरिकलाई बुस्टर डोज लगाउने बारे छलफल अघि बढाएको हो । तर, हालसम्म कुल जनसंख्याको ३४।५ प्रतिशत नागरिकले एक मात्रै डोज लगाएका छन्, भने २८।९ प्रतिशत
एजेन्सी । एउटा राम्रो आचरण भएकी महिलाले घरलाई स्वर्गजस्तै बनाउन सक्छिन्। महिला घरकी लक्ष्मी हुन् । भनिन्छ एउटा त्यतिबेला घर जस्तो बन्छ जतिबेला त्यस घरमा बस्ने महिलाले आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर त्यसको पालन गर्छन् । हरेक धर्ममा महिलाहरुको स्थान माथि राखिएको हुन्छ। यति हुँदाहुदै पनि महिलाको लागि कति काम यस्तो बताइएको छ कि जुन उनीहरुलाई गर्न इन्कार गरिएको छ। जसलाई यहाँ पस्कने जमर्को गरेका छाैं। घर छोडेर हिँड्नुहुँदैन शास्त्रको अनुसार स्त्रीहरु कुनै पनि हालतमा आफ्नो घर छोडेर हिड्नुहँदैन । अर्थात अर्काको घरमा बस्नुहुँदैन । यो कुरालाई नमान्दा धेरै नोक्सान हुन सक्ने बताइन्छ । जनै लगाउन नहुने नेपाली संस्कृतीमा जनई लगाउने परम्परा बैदिक कालदेखिनै चलिआएको छ । पुरुषको लागि जनई लगाउनु अनिवार्य मानिएको छ तर महिलाले जनई लगाएमा नराम्रो हुने मान्यता रहँदै आएको छ । जप गर्नुहुँदैन ओम मन्त्रको
रबिना देशराज समकालीन समाज भन्दा बेग्लै सोच राख्ने ब्यक्तिका रुपमा चिनिन्छिन् । उनी लैंगिकताका विषयमा परम्परागत सोच विपरित धारणा राखेर र आफ्नो विकिनी तस्बिर सार्वजनिक गरेर पनि चर्चामा छिन् । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीसँगै विकिनीमा उनको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट भएपछि त्यसले ठूलै चर्चा पायो । उनका छोरा आयुष्मान देशराज पनि अभिनेता हुन् । अभिनेत्री कार्की र आयुष्मान प्रेम सम्बन्धमा रहेका गसिपहरु पनि मिडियामा छाइरहन्छन् । सन्तान जन्माउन बिहे गर्नु नपर्ने बोल्ड धारणा राख्दै आएकी रवीना देशराजसँग प्रचलित सामाजिक ब्यवस्थाका बारेमा चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीको केहि अंश साभार गरेका छौ , महिला झन बोल्ड हुँदै गएपछि परिवारमा बिखण्डन आइरहेको छ भन्छन्, हो त ? मेरा एकजना आफन्तसँग एकदिन कुरा गर्दैथिएँ । उहाँले एउटा ग्यादरिङमा हजुरवा, हजुरवाका तीनजना श्रीमती र छोराछोरी सबै जम्मा भए
काठमाडौं, पब्लिक स्पीकर नेपाल २ बिजेता एवम् गायक तथा प्रखर वक्ता एवम् अहिले Galaxy4K बाट लाल मोहर जस्तो चर्चित कार्यक्रम चलाईरहनु भएका आदरणीय रमेश प्रसाईं सर र उहाँकी धर्मपत्नी नन्दा लाई यत्ती राम्री पुत्री लाभ भएको छ । उहाँहरु दुबै जनाको दृष्टि बनेर आएकी गुडियालाई जन्मदिनको शुभकामना सहित आमाबाबा बन्नु भएकोमा हाम्रो हार्दिक बधाई तथा सुभकामना । रमेश प्रसाईं र सामाजसेवी नन्दा सिंहलाई आज बिहान पूत्री लाभ भएको छ । अघिल्लो वर्ष विवाह बन्धनमा बाँधिएका प्रसाईं र नन्दा सिंहलाई आज काठमाडौंको एक अस्पतालमा पूत्री लाभ भएको हो । कलाकार दिपाश्री निरौला आज बिहान अस्पताल पुगेर बधाई दिंदै फोटोहरु पोष्ट गरेकी छिन् । रमेश प्रसाईंले धरानमा बसेर आफ्नो पत्रकारिता अघि बढाई रहेका थिए भने नन्दा सिंह काठमाडौंमा सामाजिक संस्था चलाईरहेकी थिईन । यी दुईको प्रेम विवाह भएको हो । विवाह पश्चात रमेश प्रसाईं काठमाडौं बस्न
Nov202021 by adminNo Comments
मंसिर ७ गतेबाट मतदाता नामावली संकलन, चैत ५ गते चुनाव घोषणा !
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचनलाई लक्षित गरेर मंसिर पहिलो सातादेखि गाउँ–गाउँमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने तयारी गरेको छ । दुई साताअघि सरकार र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफलपछि आयोगले मतदाता नामावली संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो । आयोगले मंसिर पहिलो सातादेखि स्थानीय तहको केन्द्रमा प्राविधिक खटाएर मतदाता नामावली संकलन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटसमेत माग गरिसकेको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा एक महिना मतदाता नामावली संकलन गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने आकलन गरी तिहारअघि नै बजेट माग गरेर अर्थमा पत्राचार भइसकेको आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले बताए । ‘अर्थबाट सहमति आउनेबित्तिकै हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक पठाएर मतदाता नामावली संकलन सुरु गर्छौं,’ उनले भने । आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहमा मतदाता नामावली संकलन गर्न प्राविधिकलाई एक महिनाका लागि करारमा नियुक्ति गरेर खटाउन लागेको
Nov102021 by adminNo Comments
असोज २३ गते सनिवार अनिताको अमेरिका जाने उडान थियो ।अनिताका श्रीमान अमेरिकामा छन् र श्रीमानसंग बसेर जीवनको बाँकी सपना पूरा गर्न उनी अमेरीका जाँदै थिइन् ।अमेरिकामा श्रीमानले अनितालाई स्वागत गर्न तयार बसेका थिए तर यता अनिताको श व फेला पर्यो । माइतमा अनिताका आमाबुबा छोरीलाई अन्तिम बिदाइ तयार बसेका थिए ।तर घरबाट अनिता झु न्डिएर म रेको खबर अएपछी सबै जना चकित परेका थिए ।अनिता हरेक कुराको नोट डाइरीमा लेखेर राख्ने गर्दिन् ।त्यसै नोटमा उनले देवर,सासू लगायतका परिवारले निकै पि डा दिने कुरा लेखेकी छिन् । श्रीमानले निकै माया गरेपनि उनी सात समुन्द्र पारी भएपछि घरमा एक्लै उनी भएपछि सधैं पि डा खेप्नु परेको उनको गु नासो रहेछ ।अमेरिकामा नेपाली गरगहनाको निकै महत्त्व हुने भएकाले अनिताले आफ्ना गहनाहरु उतै लग्न खोजेको र त्यो कुरा सासुलाई चित्त नबुझेपछी झ गडा हुने क्रममा यस्तो घ टना घटेको शंका गर्न सकिन्छ ।
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्यालबारे आयो दुखद खबर (24220)
पत्नीले यी काम गरिरहेकी छिन् भने कहिलै हुँदैन् पतिलाई पैसाको कमी (17147)